Manchester United Ma Ku Guuleysan Kartaa Horyaalka Premier League? | Laacibnet.net
Manchester United Ma Ku Guuleysan Kartaa Horyaalka Premier League?
Xilli ciyaareed caadi ah hogaan seddex dhibcood ka dib 17 kulan oo la ciyaaray ma noqoteen wax laga hadlo laakiin xilli ciyaareedkan ma ahan mid caadi ah.
United waxay haatan ugu sareeyaan horyaalka Premier League waana markoodii ugu horeysay ay hogaanka qabtaan waqtigaan oo kale tan iyo sannadkii 2012, waxaa taas ka sii muhiimsan inaan la beenin karin horumarka ciyaareed ee ay sameeyeen.
Xitaa sidaasi oo ay tahay waxaa jira qaar su’aal ka keenaya awooda Ole Gunnar Solskjaer ee tababarenimo iyadoo iska indhortiraya dib u habeyntiisa muhimka ah ee kooxda iyo inuu kartida ugu fiican ka soo saaray xiddigaha sida Anthony Marial, Marcus Rashford iyo muddo dheer ka dib Paul Pogba.
Hase yeeshee si tartiib tartiib ah ayay horumar uga sameynayeen horyaalka labadii sannadood ee ugu danbeysay, waxayna haatan u muuqdaan kuwa ugu yaraan awooda inay tartan u galaan hanashada horyaalka nuska hore ee sannadkan 2021.
Solskjaer ayaa hoos u dhigay ka hadal hanashada horyaalka horaantii usbuucaan, laakiin ka hadalka horyaalka ee Man United sarre ayuu u sii kici doonaa ka dib xalay.
Wado dheer ayaa sugeysa iyo inay gacanta sarre ka helaan kooxo culus haddii ay ku guuleysanayaan horyaalkoodii 21aad. Kaliya lix maalmood ka hor waxaa kala dhantaashay deriskooda Manchester City kuwaasoo qaab ciyaareedkooda fiican dib u helaya islamarkaana gaaray finalka Carabao Cup.
Maalinta Axada, waxaa xog buuxda ka heli doonaa haddii United ay awoodo hanashada horyaalka xilli ciyaareedka marka ay u safrayaan Anfield oo ay wajahayaan The Champions. Barbaro ay galaan waxay ku sii heyn doonaa kaalinta 1aad; haddii ay badiyaan lix dhibcood oo nadiif ah ayay sarre marayaan iyadoo soo gabagabeynaya rikoodhka aan Liverpool looga badinin gurigeeda kulan horyaal ah tan iyo 2017, markaas waxaa sii laba lixaadsan doona ka hadalka hanashada horyaalka iyo Shayaadiinta Cas Cas.